Cabdi Xaashi oo Rooble u gudbiyay qodobo xal u noqon kara khilaafka Siyaasiyiinta Gobolada waqooyi - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wareysiyada Cabdi Xaashi oo Rooble u gudbiyay qodobo xal u noqon kara khilaafka...
Guddoomiyaha Aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa R’iisul Wasaaraha xukuumadda xilgaasriinta Maxamed Cuseen Rooble u gudbiyey qodobo iyo tallooyin xal u noqon kara khilaafka u dhaxeeya Siyaasiyiinta Gobolada Waqooyi ee salka ku haaya doorashada goleyaasha labada Aqal ee xildhibaannada gobollada Waqooyi ee Somaliland.
Qoraalka oo ka kooban laba Bog ayaa waxaa lagu sheegay in kulankii shalay uu Ra’iisul Wasaare Rooble dalbaday in lagu wareejiyo talada & maamulka doorashada Xildhibaannada Gobolada Waqooyi, balse ay u sheegayaan in masiir Ummadeed an la wareejin Karin, hayeeshee ay u soo jeedinayaan talooyinkaan so socda.
1: in guddoomiyaja Aqalka sare iyo Ra’iisul wasaare ku xigeenka ay noqdaan hoggaanka wadajirka ah ee haga doorashooyinka xildhibaannada Somaliland.
2- dib u mideynta guddiga & Guddoonka Gudiga doorashooyinka ee SEIT.
In Guddoonka guddiga SEIT ay iska dhex doortaan 8-da xubnood ee ka yimid deegaan doorashada Somaliland kaliya , haddii ay ismari waayaanna loo sameeyo isla guddoon sida lagu heshiiyey 19-kii June 2020.
In labada dhinac si cadaalada ah loogu qeybiyo Guddoonka Guddiga oo dhinac la siiyo guddoomiyaha Gudiga dhinaca kalena Guddoomiye kuxigeenka iyo xoghayaha Gudiga.
In doorashada xildhibanaada Gobollada Waqooyi (Somaliland) lagu qabto hangarka Cidanka Cirka ce Xalane.
In amniga doorashada kuraasta xildhibaanada Somaliland ay sugaan cidanka booliska Soomaaliya iyo Amisom.
Ugu dambeyn qoraalka guddomiyaha Aqalka Sare ayaa waxaa lagu soo geba-gabeeyay, Haddaba, Mudane Ra’üsul Wasaare, waxaanu rajaynaynaa in aad ku qanci doonto hindisayaashaas xal raadinta ee aanu kuu soo jeedinay. Waxaanu ku talineynaa in arinka loo saaro guddi dhexdhexaad ah oo labada dhinacba ku qanacsan yihiin oo xal kama dambeys ah ka keena arrimaha lagu muransan yahay.
Mudane Ra’sul Wasaare, haddii aad qaadato go’aan aad ku raali gelinayso hal dhinac, waxaan kuu xaqoojineynaa in aan annaguna qadan doonno go’aan aan kaga tashananayno aayaha dadka aanu matalno iyo madaxbanaanida doorashadooda.
Previous articleGalmudug oo sheegtay inay la wareegeen degaanka Camaara
Next articleRooble oo dowlad Goboleedyada ugu baaqay inay deg deg u bilaabaan doorashada